Is Pun Hlaing Estate safe & luxurious gated lifestyle retirement community right for you?
Transformational & flexible living arrangement
As we grow older, we worry about retiring inaplace without proper and accessible international standard medical care. While some of us may need special care; such as nutrition and wellness services from caregivers or doctors, others are in good health and enjoy travelling and meeting like minded individuals in the same age group. Regardless of which group you belong to, Pun Hlaing Estate,aspacious 652-acre estate, can cater to both of your desires and needs. By working closely with Pun Hlaing Siloam Hospital, an independent home can be easily transformed to an assisted living arrangement instantaneously!
A la carte luxury amenities and services
At your request or your family members' request, the country club can prepare your meals, the estate management can provide you with safe & trained housekeeping staff, nurses from the hospital can take care of your medication needs and our customer service team can arrange your regular appointment with doctor. If there are any health issues, your doctors will contact your family members and let them know you are well taken care of.
However, if your preference is simply to live amongstacaring community, continue an active lifestyle such as playing golf and have your daily swims at the country club, this could also be arranged. You can join all the events organised for the residents such asadrive-in movie night or clean up the estate with the rest of the residents! You can also pamper yourself with luxurious and pampering spa treatments at the oasis spa at the country club.
လုံခြုံစိတ်ချ၊ သီးသန့်ကောင်းမွန်သော ပန်းလှိုင်အိမ်ရာသည် အငြိမ်းစားယူပြီးလျှင်နေထိုင်ရန်သင့်တော်သော လူနေမှုပုံစံဖြစ်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အငြိမ်းစားယူပြီးလျှင်နေထိုင်ရန် စိတ်ချကောင်းမွန်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရယူနိုင်သောနေရာတွင်နေထိုင်နိုင်ရန် စဉ်းစားတတ်ကြသည်။ တချို့မှာ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဆရာဝန်များ၏ အာဟာရနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်မှု ရယူရန်လိုအပ်ပြီး တချို့မှာမူ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကာ ခရီးသွားခြင်း၊ မိတ်ဆွေများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းတို့ ကိုနှစ်သက်တတ်ကြသည်။ သင်သည်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ရယူလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လိုသည်ဖြစ်စေ (၆၅၂) ဧကကျယ်ဝန်းသော ပန်းလှိုင်အိမ်ရာသည် သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံသည် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာနှင့် မနီးမဝေး တွင် တည်ရှိသောကြောင့် သင်၏ အိမ်ကို အမှီအခိုကင်းသော အိမ်အဖြစ်မှ ကူညီနေထိုင်မှု အစီအစဉ် အဖြစ်သို့ ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သီးသန့်သာလွန်ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု
သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက် country club သည် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအသင်းမှ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပေးထားသော housekeeping ဝန်ထမ်းများ၊ ဆေးရုံမှ သူနာပြုများ စသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှာ သင်၏ဆေးဝါးကုသမှုနှင့်ဆိုင်သော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးမည့်အပြင် ဆရာဝန်နှင့်ပုံမှန် ရက်ချိန်းယူခြင်းမျာကို လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အကယ်၍ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဂရုစိုက်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ ဂေါက်ရိုက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းအစရှိသည့် တက်ကြွသောလူနေမှုပုံစံ၊ အိမ်ရာတွင်းနေထိုင်သူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစီအစဉ်များ၊ ပြီးပြည့်စုံ သော spa treatment ပြုလုပ်ခြင်းအစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သော အိမ်ရာ၌ ပင်စင်ယူပြီးချိန်တွင် နေထိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါက ပန်းလှိုင်အိမ်ရာ၏ စီမံကိန်းအသစ်နှင့် အိမ်များကို လာရောက်လေ့လာရန် ဖိတ်ခေါ် ပါသည်။